ကြင်နာမှု — Steemkr
ဒါဟာမှန်ကန်စွာ "သင်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ကျေးဇူးပြုလျှင်သင်ကလုံးဝမကောင်းတဲ့နေ့ကရှိတယ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်" ဟုဆိုသည်။ အခြားသူများကိုဦးတည်ကြင်နာပြီးသနားကြင်နာတတ်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကြီးမားဝမ်းမြောက်စေ၏။ ပေးကမ်းခြင်း၏ဝမ်းမြောက်ခံယူ၏ထက်အများကြီးကြီးမြတ်တော်မူ၏။ ကြင်နာမှုကိုဘုရားသခင်အားကိုအနီးကပ်လာရရှိသွားတဲ့နှင့်အတွင်းပိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးပြန်ဆို။
ကြင်နာမှု၏တမန်တော်သတိမပြုမိ Go ဘယ်တော့မှမ
ကျနော်တို့ပြန်ဘာမှမျှော်လင့်စရာမလိုဘဲကြိုးမငဲ့ဘဲကြင်နာမှုအပြုအမူအတွက်လုပ်ကြရမယ်နေစဉ်, ဒါပေမဲ့ဒါဟာကြင်နာမှုမရှိလုပ်ရပ်ပင်အသေးဆုံးတဦးတည်းကပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်, သတိမပြုမိတတ်၏။ ဘုရားသခင့အားလုံးအချိန်များတွင်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမင်းသည်မိမိအကျင့်တို့ကိုအတွက်တရားမျှတဖြစ်ခြင်းများအတွက်လူသိများသည်။
အခြားသူများနှင့်ယဉ်ကျေးဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ကြင်နာဖြစ်ခြင်းကျွန်တော်ငြင်းခုံသို့ရသည့်အခါအချိန်ကာလမှနှိုင်းယှဉ်ပါကအကောင်းတစ်ဦးခံစားချက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်, သို့မဟုတ်အခြားသူများတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်သို့မဟုတ်ကျနော်တို့ရဲ့အသံကို။ အလားတူပင်တစ်စုံတစ်ယောက်ကမှပင်သေးငယ်တဲ့အကူအညီကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပတ်သက်. အကောင်းခံစားမိစေသည်။ အခြားသူတွေကိုကူညီပေးခြင်းနှင့်သူတို့ကိုကြင်နာဖြစ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုတစ်ခုချက်ချင်းအသိကိုပေးတော်မူ၏။ သမျှကျွန်တော်ပေးများစွာသောနောက်ကျောကိုအထံသို့မရောက်ရ။ ဤသည်ကိုလည်း Karma ၏တရားအဖြစ်လူသိများသည်။
ရုံလူသားနှင့်အတူ, ငါတို့သည်လည်းတိရိစ္ဆာန်များဆီသို့ဦးတည်ကြင်နာဖြစ်ရမည်မဟုတ်ပါဘူး။ လူအတော်များများဟာသူတို့ကိုပယ်တွှေဖို့လမ်းခွေးတွေနှင့်နွားကိုကျောက်ခဲနှင့်ပစ်။ ပြုလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိပ်သည်း၏လုပ်ရပ်အဖြစ်သို့သော်များစွာသောလူပဲပျော်စရာအဘို့ထိုသို့ပြုလျှင်ပွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မဟုတ်ဘဲသူတို့ကိုဆီသို့ဦးတည်ကြင်နာဖြစ်ရပါမည်။ သင့်လျော်စွာတိရစ္ဆာန်တွေကိုကုသသူတို့ကိုနို့တိုက်ကျွေးမှုကသူတို့ကိုဦးတည်ကြင်နာမှုကိုပြသနည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့အစဉ်အဆက်ယခုအခါအစားအစာတွေအများကြီးဖြုန်းတီး။ ကျနော်တို့ dustbin ၌အကြှနျုပျတို့၏ကျန်တဲ့အစားအသောက်ပစ်။ အဲဒီအစားတူကလွှင့်ပစ်၏, ငါတို့ကငါတို့ဗိမာန်အနီးတဝိုက်ရုမ်းမင်းကြောင်, ခွေးနှင့်နွားတွေအစာကျွေးဖို့အချိန်အနည်းငယ်ထဲကယူရမည်ဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်လည်းသူတို့ကိုချမှတ်အားဖြင့်သူတို့ကိုဦးတည်ကြင်နာမှုကိုပြသနိုင်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာကျွန်ုပ်တို့မြက်ခင်းသို့မဟုတ်လသာဆောင်များတွင်ငှက်လမ်းခွဲဆွဲထားခြင်းဖြင့်ငှက်အစာကျွေးနိုင်ပါတယ်။ ကြင်နာမှုဤအသေးစားနှင့်ကျပန်းလုပ်ရပ်များသည်ဤငှက်နှင့်တိရိစ္ဆာန်များမှကောင်းသောပြုလိမ့်မည်မသာပေမယ့်လည်းသင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းကိုပိုကောင်းခံစားရစေပါလိမ့်မယ်။
ပရဟိတအလုပ်အတွက်လုပ်ကြနှင့်အမျိုးမျိုးသောကြီးတွေနှင့်အသေးစားလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုနှင့်အတူအခြားလူကိုကူညီသူတွေကိုကိုယ်တိုင်သာအလုပ်လုပ်သောသူထက် ပို. ပျော်ရွှင်ကြသည်။
esteem good-karma share kindness others